सुताईबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ तपाईलाई कति माया गर्दछन् पार्टनरले ? | सुदुरपश्चिम खबर
सुताईबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ तपाईलाई कति माया गर्दछन् पार्टनरले ?
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ १८, २०७८ 7
लोमा बेरेर सुत्ने गर्दछन्। तर विवाहको केही वर्षपछि पनि तपाईको पार्टनर यसैगरी सुत्ने गर्दछन् भने त्यो त खुसीको कुरा हो । तर यस्तो छैन भने तपाईको सम्बन्धमा कुनै गडबढी अवश्य छ।
रातमा तपाईको पार्टनरसँग सुत्ने तरिकाले पनि तपाईको प्रेम सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने काम गर्दछ। अनुसन्धानले पनि सुत्ने पोजिसनबाट आफ्नो प्रेम कस्तो छ भन्ने बारे थाहा पाउन सकिने देखाएको छ। आज हामी तपाईलाई पार्टनरको सुत्ने पोजिसनबाट कसरी प्रेम थाहा पाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिदैछौँ।
यदी तपाईकी पत्नी तपाईको काँधमा शिर राखेर सुत्ने गर्दछिन् भने उनलाई तपाईको निकै चिन्ता लाग्ने गर्दछ। धेरै जसो पार्टनर यस पोजिसनमा सुत्न मन पराउछन्। यसरी सुत्ने पत्नीले आफ्नो पार्टनरलाई निकै माया गर्ने गर्दछन्।
यदी सुत्ने समय तपाईको पार्टनर आफ्नो पिठ्यु तपाईतिर टाँसेर सुत्ने गर्दछन् भने उनी तपाईसँग निकै खुसी छिन्। विवाहको धेरै वर्षपछि पनि तपाईको पार्टनर यसरी सुत्नु तपाईसँग धेरै प्रेम गर्नुको सबुत हो।
यदी तपाईको पार्टनर तपाईप्रति नभई पछाडि मुख फर्काएर सुत्ने गर्छन भने यो तपाईको सम्बन्धमा दूरी आएको शंकेत हो। विवाहको धेरै वर्षपछि कयौँ जोडी यो पोजिसनमा सुत्ने गर्दछन्।
यिनीहरुमा एक अर्काप्रति कुनै रोमान्स हुँदैन्। तर तपाईको पार्टनर पछाडि मुख फर्काएर ढाड भने तपाईतिर टाँसेर सुत्ने गर्दछन् भने उनीहरुको प्रेम तपाईप्रति केन्द्रित हुने गर्दछ।
विवाहको १०, १५ वर्षपछि तपाईको पार्टनर तपाईसँग टाँसिर सुत्न जरुरी छैन्, तर सुत्ने समयमा तपाई र तपाईको पार्टनरको अनुहार एक अर्कातिर फर्काएर सुत्नु पर्दछ। यसरी सुत्ने पार्टनरले तपाईलाई निकै प्रेम गर्ने गर्दछन्। नयाँ पुस्ता बाट सभार